Nin dumaashiis wasay sababtaan aawgeed | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada galmada Nin dumaashiis wasay sababtaan aawgeed
Sunday, November 13, 2016 Bulshada , galmada
Iyada waxay iska aaday jikada si ay ugu keento shaah iyo cabitaan iwm. ninkii keligii ayaa meesha looga tagay, meesha waxaa yaalay Remote wuxuu is dhahay ninka TV ga iska shid, markuu shiday waxaa soo baxay filin wasmo ah oo ninka meesha ayuu ku kambabay wuuna damin waayay kacsi dartii,.
Qolka fadhiga ayay soo gashay dumaashidiisa iyadoo saah u wado marka ay sidan u eegtay ninka oo baddalan ayay fiirisay tvga waxay aragtay wax ay la yaabto nin iyo naag oo isku hayo gus iyo laan isku jiro dumaashigeeda oo gurigeeda ku fiirsanayo naagtii way is reebi weyday dumaashigeeda ayay soo agfariisatay iyadoo yaaban marka ay ag fariisatay nin kacsan oo naag keligeeda soo ag fariistay maxaad ka sugaysaa.
Ninka dumaashida ayuu ku booday iyadana iskama reebin meeshii ayuu ku cunay, waxaa cadaatay cajalad video inay ahayd oo gabdhaheeda ku halmaamay kasetka, ninka marka uu meesha soo galay uu shiday isagoon ogayn, markaas ayuu kacsaday, bal eeg filimada sigiska waxay sameeyaan. siil marka la arko ninka maskaxda ayuu waynayaa. waxaa la rabaa in layska ilaaliyo naag in khalwo lala galo, dumashida mararka qaarkood iyada ayaa lumisa dumaashigeeda oo ku dhedhdegto si ay u kiciso, kacsiga dumaashiga ayuu ku xiran yahay iyo akhlaaqdeeda, rag badan ayaa jiro dumaashi ku dhacay oo fara xumeeyay.
wasmada dumarka aan xalaal kuu ahayn noloshaada ayay burburinaysaa siiba marka ay kuu dhowdahay, sida eedada ama habaryarta walaasha danbiga ugu weyn ayaa lagu tiriyaa.